सन्दिपको शानदार प्रदर्शन, जमैका ट्रिन्बागोसँग १९ रनले पराजित – Talking Sports
सन्दिपको शानदार प्रदर्शन, जमैका ट्रिन्बागोसँग १९ रनले पराजित
क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपीएल) अन्तर्गत आफ्नो सातौं खेलमा नेपाली रास्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर सन्दिप लामिछाने जमैका तल्वाज ट्रिन्बागो नाइट राईडर्ससँग १९ रनले पराजित भएको छ । ट्रिन्बागोको यो लगातार सातौं जित हो भने जमैकाको चौथों हारको ।
ट्रिन्बागोले दिएको १८५ रनको विशाल लक्ष्य लिएर ब्याटिङमा आएको जमैकाले पुरै २० ओभर खेल्दै छ विकेटको नोक्सानीमा मात्र १६५ रन बनाउन सक्यो ।
जमैकाको तर्फबाट ओपनर ग्लेन फिलिप्सले ३१ बलमा ४१ तथा आन्द्रे रसेलले २३ बलमा पाँच चौका र चार छक्काको मद्धतमा अविजित ५० रन बनाए पनि अन्य ब्याट्सम्यानले योगदान दिन नसक्दा हारको सामना गर्न पर्यो ।
यस अघि खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको ट्रिन्बागोले पुरै २० ओभर खेल्दै छ विकेटको नोक्सानीमा १८४ रनको विशाल योगफल तयार पार्यों ।
ट्रिन्बागोका कोलिन मुन्रोले सर्वाधिक ६५ रन बनाए भने कप्तान काइरन पोलार्डले तुफानी पारी खेल्दै १६ बलमा अविजित ३३ रनको योगदान दिए ।
जमैकाको तर्फबाट कार्लोस ब्राथवेटले सर्वाधिक दुई विकेट लिए भने फेडल एडवार्डस् र सन्दिप लामिछानेले समान १-१ विकेट हात पारे । सन्दिप बाहेक अन्य बलर महँगो साबित हुँदा ट्रिन्बागोले ठुलो योफल बनाउन सफल भयो ।
ट्रिन्बागो विरुद्धको पहिलो लेगमा ३० रन खर्चिएर एक विकेट हात पारेका सन्दिपले आज किफायती बलिङ गर्दै चार ओभरमा २० रन खर्चिएर एक विकेट हात पारेका छन् । यस सँगै सन्दिपले यस सिजनको सबै खेलमा विकेट हात पार्न सफल भएका छन् ।
पहिलो ओभरमा मात्र तीन रन खर्चिएका सन्दिपले दोश्रो ओभरमा एक विकेट निकाल्दै आठ रन खर्चिए । त्यस्तै तेश्रो ओभरमा दुई रन दिएका सन्दिपको अन्तिम ओभरमा सात रन खर्चिए ।
जमैका तल्वाजको लागि १०औं ओभर लिएर आएका सन्दिपले आफ्नो दोश्रो ओभरको तेश्रो बलमा २५ रन बनाएका लिन्ड्ल सिमन्सलाई मुजिब उर रमानको हातबाट क्याच थमाएका हुन् ।
सन्दिपले सिपीएलको जारी सिजनमा यस अघि छ खेल खेल्दै नौं विकेट हात पारेका थिए । सेन्ट लुसिया जुक्स र ट्रिन्बागो नाइट राईडर्स विरुद्धको खेलमा महँगो साबित भए पनि सन्दिपले दुबै खेलमा समान १-१ विकेट हात पारे । सन्दिपले सेन्ट लुसिया विरुद्ध चार ओभरमा २३ रन तथा ट्रिनबागो विरुद्ध चार ओभरमा नै ३० रन खर्चिए ।
त्यस पछिका लगातार चार खेलमा सन्दिपले निकै किफायती बलिङ गर्न सफल भएका छन् । गायना एमेजन वारियर्ससँगको दुई खेल मध्य पहिलोमा आठ रन खर्चिएर दुई विकेट लिए भने दोश्रोमा १२ रन खर्चिएर एक विकेट हात पारे । त्यस्तै उनले पछिल्लो खेलमा सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस प्याट्रियट्स विरुद्ध २७ रन खर्चिएर दुई विकेट आफ्नो नाममा लेखाएका थिए ।
सन्दिपले बार्बाडोस ट्राइडेण्ट्स विरुद्ध १२ रन खर्चिएर एक विकेट हात पारेका थिए । बार्बाडोससँगको खेलको चौथों ओभरको पाँचौं बलमा चौका खाएका सन्दिपको ७५ बल पछिको पहिलो बाउन्ड्री हो । यस अघि सन्दिपको ७५ बल सम्म कुनै पनि ब्याट्सम्यानले चौका अथवा छक्का प्रहार गर्न सकेका थिएनन् ।
इंग्ल्यान्ड माथि पाकिस्तानको पाँच रनको रोमान्चक जित
सेभियाले राकिटिचलाई बार्सिलोनाबाट फर्कायो
वेस्ट इन्डिजका तीब्र गतिका बलर जेसन होल्डरले घातक बलिङ गर्दा घरेलु टोली इंग्ल्यान्डले पहिलो ट्वान्टी ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नौ विकेटको लज्जास्पद हारको सामना गरेको छ । जितसँगै वेस्ट इन्डिजले पाँच खेलको शृंखलामा १-० को अग्रता पनि हात पारेको छ ।
खेलमा टस जितेर पहिले बलिङ गर्ने निर्णय लिएको वेस्ट इन्डिजले इंग्ल्यान्डलाई १९ दशमलब चार ओभरमा १०३ रनमा रोक्यो भने १७ दशमलब एक ओभर खेल्दै एक विकेटको नोक्सानीमा लक्ष्य पार गर्यो ।
इंग्ल्यान्डलाई सानो स्कोरमा रोक्ने क्रममा होल्डरले तीन दशमलब चार ओभर बलिङ गर्दै एक मेडन ओभर सहित सात रन खर्चिएर चार विकेट हात पारे । होल्डर बाहेक महँगो साबित भए पनि शेल्डन कोट्रेलले चार ओभर ओभरमा ३० रन दिएर दुई विकेट आफ्नो नाममा दर्ता गराए ।
वेस्ट इन्डिजको जितमा ब्याटिङमा ब्रेन्डन किंगले अविजित रहँदै सर्वाधिक ५२ रनको पारी खेले भने निकोलस पुरनले पनि अविजित रहँदै २७ रन बनाए । त्यस बाहेक शे होप २० रन बनाएर आउट भए ।
४९ रनको अवस्थामा सात विकेट गुमाएको इंग्ल्यान्डको लागि आठौं र नवौ नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका क्रिस जोर्डन र आदिल रशिदले क्रमश २८ र २२ रन जोड्दै इंग्ल्यान्डलाई तीन अंकको योगफल सम्म पुर्याए । उनीहरु बाहेक कप्तान ओएन मोर्गनले १७ र जेम्स विन्सले १२ रन बनाए भने अन्य कुनै पनि ब्याटरले दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन् ।
इंग्ल्यान्डका ओपनरहरु जेसन रोय र टम बान्टन क्रमश ६ र चार, मोइन अली गोल्डेन डक आउट, साम बिलिंग्स र लियाम डसन समान २-२ रन बनाएर पेभेलियन फर्किए ।
इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) विश्वको सबैभन्दा चर्चित लिग मध्यको एक हो । जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बिसीसीआई) ले सन् २००८ मा आईपीएल सुरु गर्यो पछिल्लो १४ संस्करणमा यसले विश्व क्रिकेट र विषेश गरि भारतीय क्रिकेटलाई अर्कै स्तरमा पुर्याउन सफल रह्यो । त्यस बाहेक यसले क्रिकेटलाई नै चर्चित बनाउन पुग्यो ।
तर १५ औं संस्करण सम्म आइपुग्दा आईपीएल एउटा राम्रो व्यवसाय पनि बन्न पुग्यो । खेलाडीहरुले करोडौं रुपैयाँ कमाउनु बाहेक फ्रेन्चाइजहरुले पनि अरबौं रुपैयाँ आम्दानी गर्दछन् आईपीएलबाट ।
ठूला व्यवसायिक घरानाहरूको लगानी गरिएका कारण मात्र नभएर अन्य व्यापारीहरूले पनि यसमा लगानी गर्न इच्छुक भएकाले गर्दा पनि आईपीएलमा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
बिसीसीआईले १५ औं संस्करणको आईपीएलमा दुई टोली थप्ने निर्णय गर्यो । त्यसमा दुई टोलीहरु लखनउको लागि सन्जिव गोयन्काको आरपीएसजी ग्रुपले सात हजार करोड भारु तथा अहमदाबादका लागि सिभीसी क्यापिटल्सले ५२ सय करोड भारु खर्च गरेको थियो । त्यस्तै इंग्लिस प्रिमियर लिग टोली म्यानचेस्टर युनाइटेडले समेत आईपीएलमा टोली किन्नका लागि आवेदन दिएको कुराले पनि यो कति ठुलो व्यापार हो भन्न सकिन्छ ।
फ्रेन्चाइजहरुको आम्दानी भनेको टिभी राइट, स्पोन्सर र टिकटको पैसा हो । जर्सी नै ढाकिने गरि भिन्न ब्रान्डहरूले गरेको विज्ञापन बापत फ्रेन्चाइजहरुले करोडौं उठाउने गरेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा हामी आज आईपीएलका पाँच धनी टोलीहरुको चर्चा गर्दैछौँ ।
५. सनराईजर्स हैदराबाद
सन टिभीका मालिक कलानिथी मरनको स्वामित्वमा रहेको सनराईजर्स हैदराबाद १० मध्य सबैभन्दा धनी टोलीको पाँचौं स्थानमा रहेको छ । हैदराबादको प्रतिनिधित्व गर्ने यस टोलीको मूल्य पाँच सय करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको छ ।
सन् २०१२ मा स्थापना गरिएको यस टोलीले सन् २०१३ को संस्करणबाट आईपीएल खेल्न सुरु गर्यो । त्यसको तीन वर्ष पछि सन् २०१६ मा उसले पहिलो पटक आईपीएलको उपाधि चुम्न सफल भयो । त्यस बाहेक सन् २०१८ को संस्करणमा फाइनल सम्मको यात्रा तय गरे पनि चेन्नाई सुपर किंग्ससँग आठ विकेटले पराजित हुँदा हैदराबाद उपविजेतामा सीमित हुन पुग्यो ।
४. चेन्नाई सुपर किंग्स
चेन्नाई सुपर किंग्स आईपीएलको सबैभन्दा सफल फ्रेन्चाइज मध्य एक हो । पहिलो संस्करण देखि हाल सम्म भारतका पूर्व तथा सबैभन्दा सफल कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा रहेको चेन्नाईको स्वामित्व भारतीय क्रिकेट बोर्डका अध्यक्ष एन श्रीनिवासनको इन्डियन सिमेन्टको नाममा रहेको छ ।
आफुले खेलेका १२ संस्करणमा नौ पटक फाइनलको यात्रा तय गरेको चेन्नाईले सन् २०१०, २०११, २०१८ र २०२१ को आईपीएलको उपाधि चुमेको थियो भने सन् २००८, २०१२, २०१३, २०१५ र २०१९ मा गरेर पाँच पटक उपविजेतामा सीमित भएको थियो । मालिकहरु सट्टेबाजमा संलग्न भएको भन्दै चेन्नाई र राजस्थान रोयल्सलाई बिसीसीआईले सन् २०१६ र २०१७ गरेर दुई सिजनको लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
चेन्नाईको बजारी मूल्य ६ सय ९७ करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको छ । नौ पटकको फाइनल खेलेको टोली तथा सबैभन्दा धेरै पटक प्लेअफ सम्म पुग्ने टोली धनी क्लबहरुको सुचीको चौथों स्थानमा पुग्नु सबैलाई अस्चार्य पार्ने विषय हो । तर दुई सिजनको प्रतिबन्धले पनि यसको असर परेको नकार्न सकिन्न ।
यो पनि पढ्नु होस् –
७ बर्षपछि जितेन्द्र मुखियाले देखेको उज्यालो
३. रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर
सफलताको कुरा गर्ने हो भने बेंगलोर आईपीएलका सबैभन्दा असफल टोली हो । तीन पटक फाइनलको यात्रा तय गरेको बेंगलोरले एक पटक पनि उपाधि चुम्न सकेको छैन । त्यस बाहेक उसले दुई पटक प्ले अफमा स्थान बनाएको थियो भने बाँकी संस्करणमा खासै राम्रो प्रदर्शन दिन सकेको थिएन ।
उपाधि चुम्न असफल रहे पनि सायद चर्चित भएका कारणले नै होला रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर ६ सय ७९ करोड भारतीय रुपैयाँ सहित धनी क्लबहरुको सुचीको तेश्रो स्थानमा रहेको । भारतका चर्चित ब्यापारी विजय माल्याको लगानी रहेको बेंगलोर पछि उनकै कम्पनी युनाइटेड स्प्रिट्सको नाममा रहेको छ ।
चर्चित खेलाडीहरुको बाहुल्यता रहने भएका कारण पनि बेंगलोर समर्थक माझ निकै चर्चित छ । राहुल द्रविड, केविन पिटरसन, अनिल कुम्बले र डेनियल भेट्टोरी जस्ता चर्चित पुरा खेलाडी देखि विराट कोहली र एबी डि भिलियर्स जस्ता चर्चित नामले गर्दा पनि बेंगलोरको मूल्य धेरै भएको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
२. कोलकाता नाइट राईडर्स
बलिउडका चर्चित हिरो शाहरुख खान, जुही चावला र जय मेहताको लगानी रहेको कोलकाता नाइट राईडर्स सात सय ४० करोड भारतीय रुपैयाँ सहित सबैभन्दा धनी आईपीएल टोलीको दोश्रो स्थानमा छ ।
तीन पटक फाइनलमा स्थान बनाएको कोलकाताले सन् २०१२ र सन् २०१४ मा गरेर दुई पटक उपाधि चुम्दा गत संस्करणमा उपविजेतामा खुम्चिन पुगेको थियो । त्यस बाहेक उसले अर्को दुई पटक प्लेअफ सम्मको यात्रा तय गरेको थियो ।
उपाधिको हिसाबले हेर्ने हो भने एकदमै सफल टोली नरहेको र चर्चित खेलाडीहरुको पनि बाहुल्य नरहे पनि कोलकाताले धनी टोलीमा चेन्नाई र बेंगलोर जस्ता टोलीलाई पछि पार्न सफल भएको छ । यसको मुख्य कारण शाहरुख पनि हुनसक्दछ ।
१. मुम्बई इन्डियन्स
मुम्बई इन्डियन्स आईपीएलको सबैभन्दा सफल र सबैभन्दा धनी क्लब हो । पाँच पटकको उपाधी विजेता मुम्बईको बजारी मूल्य १०० मिलियन डलर भन्दा बढी रहेको छ र उ १०० मिलियन डलरको आईपीएल टोली बन्ने पहिलो र एक मात्र टोली हो ।
भारतका धनाड्य मुकेश अम्बानीको लगानीमा रहेको मुम्बई पाँच पटक आईपीएलको उपाधि जित्ने एक मात्र टोली हो । उसले सन् १०१३, सन् २०१५, सन् २०१७,सन् २०१९ र सन् २०२० मा गरेर पाँच पटक आईपीएलको उपाधी जितेको थियो भने सन् २०१० को संस्करणमा उपविजेतामा सीमित भएको थियो ।
मुम्बईको बजारी मूल्य आठ सय तीन करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको छ ।
एक खेल बाँकी छदै भारतले दक्षिण अफ्रिकाबिरुद्ध श्रृंखला गुमायो
ओपनरद्वय यानेमन मलान र क्विन्टन डि ककले अर्धशतकीय पारी खेल्दा दक्षिण अफ्रिकाले भारत विरुद्धको दोश्रो एकदिवसीय खेलमा सात विकेटको सहज जित हात पार्दै शृंखला माथि पनि कब्जा जमाएको छ । पहिलो खेलमा ३१ रनले पराजित भएको भारत एक खेल बाँकी रहँदा नै शृंखला गुमाउन पुगेको हो ।
जितका लागि २८८ रनको लक्ष्य पक्ष्याएको दक्षिण अफ्रिकाले ४८ दशमलब एक ओभर खेल्दै तीन विकेट गुमाएर लक्ष्य पार गर्यो ।
सुरुवात देखि नै भारती बलर माथि हाबी रहेको दक्षिण अफ्रिकाको जितमा मलान र डि ककले पहिलो विकेटका लागि २१ दशमलब छ ओभरमा १३२ रन जोड्दै राम्रो सुरुवात दिए । दक्षिण अफ्रिकाको जितमा मलानले १०८ बल खेल्दै आठ चौका र एक छक्काको मद्धतमा सर्वाधिक ९१ रन जोडे भने डि ककले आक्रामक पारी खेल्दै ६६ बलमा सात चौका र तीन छक्का सहित ७८ रनको पारी खेले ।
डि ककको विकेटको पतन पछि क्रिजमा आएका कप्तान टेम्बा बभुमाले मलानसँग मिलेर ८० रनको साझेदारी गर्दै जित नजिक पुर्याए । मलान र ३५ रन बनाएका कप्तान बभुमा दुई रनको अन्तरालमा आउट भए पनि एडेन मरक्रम र रसी भान डर डुस्सेनले समान ३७-३७ रन जोड्दै दक्षिण अफ्रिकाको जित सुनिश्चित गरे ।
भारतका जस्प्रित बुम्रा, युज्बेन्द्र चहल र शार्दुल ठाकुरले समान १-१ विकेट हात पारे ।
यस अघि विकेट किपर ऋषभ पन्त र केएल राहुलले अर्धशतक प्रहार गरे पछि खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले ५० ओभर खेल्दै ६ विकेटको नोक्सानीमा २८७ रन बनायो ।
भारतको तर्फबाट पन्तले ७२ बलको सामना गर्दै १० चौका र दुई छक्का सहित सर्वाधिक ८५ रन बनाए भने कप्तान राहुलले संयमित भएर ब्याटिङ गर्दै ७९ बलमा चार चौका सहित ५५ रनको पारी खेले ।
अर्का ओपनर शिखर धवन २९ तथा विराट कोहली शुन्य रनमा आउट हुँदा राम्रो सुरुवात गर्न नसकेको भारतको लागि पन्त र राहुलले तेश्रो विकेटको लागि ११५ रनको साझेदारी गर्दै पारी सम्हाले ।
श्रेयस ऐयर ११ र भेन्कटेश ऐयर २२ रनमा आउट भए पनि शार्दुल ठाकुर र रविचन्द्रन अश्विनले अविजित रहँदै क्रमश ४० र २५ रनको योगदान दिए ।
दक्षिण अफ्रिकाका तबरिज शाम्सीले सर्वाधिक दुई विकेट हात पारे ।
पन्त र राहुलको अर्धशतकमा भारतको चुनौतिपूर्ण योगफल
आहा–रारा गोल्डकपः सब्स्टिच्युट गोलकिपर रोशन चम्किएपछि पुलिस क्वार्टर–फाइनलमा